Netrunner Linux inogamuchira yayo yaApril 2019 kugadzirisa pamwe new design | Linux Vakapindwa muropa
Netrunner Linux inogamuchira yayo yaApril 2019 inogadziridza neyakagadzirwa nyowani
Dare rekuvandudza riri kumashure kweNetrunner Linux Project rakaburitsa vhezheni itsva Netrunner Kutenderera 2019.4, Kubvumbi kuvaka kweiyi Arch Linux-yakavakirwa kugovera.
Kutevera kuburitswa kwaNdira 2019, netrunner 19.01, iyo vhezheni kusatenderera zvekuparadzirwa uku, uko mune izvo zvinoenderana neDebian, Netrunner Rolling 2019.04 iri pano neKDE Plasma 5.15.3 graphical nharaunda inoperekedzwa neKDE Applications 18.12.3 software suite uye KDE Frameworks 5.56.
Netrunner Rolling 2019.04 inouyawo ne Mozilla Firefox 66.0.3 Quantum nekutadza, nekubatana kuzere neiyo KDE Plasma graphical nharaunda. Iyo Mozilla Thunderbird 60.6 tsamba mutengi iripowo, zvese zviri pasi peLinux Kernel 4.19.32 LTS.
Dhizaini nyowani, kugadzirisa kweWebhu Apps
Zvakafanana neNetrunner 19.04, Netrunner Rolling 2019.04 inouya nerutsva nyowani tema inofambiswa neKvantum chishandiso, iyo inopa yazvino uye nyowani dhizaini. Pamusoro pezvo, kupenya kudiki kunoonekwa kana vashandisi vadzikisa ese maapplication uye kudzokera kune yekare dhizaini kuri nyore.
Kunze kweizvi, Netrunner Rolling 2019.04 inowedzera a chikamu chitsva mumenu yekushandisa inonzi Webapps, uko iwe kwaunogona kuwana ako ese webhu kunyorera uye ese maKCM ma module zvine chekuita neiyo interface akave akabatanidzwa muchikamu chinonzi Plasma Tweaks. Unogona kudhawunirodha Netrunner Rolling 2019.04 kubva Iyi link kana kukwidziridza kuisirwa kwako kuripo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Netrunner Linux inogamuchira yayo yaApril 2019 inogadziridza neyakagadzirwa nyowani
Vashandisi veSamsung vava kugona kuedza Linux paDex